Furista ururada iyo xeer No.14 oo ruxay ajandaha Kal-fadhiga 13aad ee Wakiilada | Somaliland.Org
September 21, 2010	Hargaysa (Somaliland.Org)- Mudanayaasha golaha Wakiilada Somaliland, ayaa shalay gudogalay ajandaha kalfadhigooda 13-aad.
Fadhigaas shalay oo uu shirgudoominayay guddoomiye kuxigeenka 2aad ee golaha Wakiilada Baashe Maxamed Faarax, waxay mudaneyaashu ku gudogaleen ajandaha kalfadhigooda, iyadoo mudaneyaal dhawr ahi aragtidooda ka dhiibteen.
Mudaneyaasha doodaa shalay ka qaybgalay waxay si wayn ugu kala qaybsameen in ajandaha lagu xeerka lagu unkay ururada/xisbiyada siyaasada ee xeer No.14. “Waxaan qabaa in xeer No-14 lagu soo kordhiyo ajandaha, maaha khasab inaynu ka fikirno ma ururo ayaa la furayaa mise lama furayo. Laakiin, anigu waxaan qabaa inay meesha soo gasho ma furan yihiin, mise way xidhan yihiin, inkastoo aan anigu qabo inaanay xidhnayn,” sidaa waxa yidhi Xildhibaan Maxamed Cali Xirsi oo ka qaybgalay doodaa shalay.
Xildhibaan Ibraahim Cali Rayte oo ka mid ah mudaneyaasha dooda shalay ka qaybgaly, waxa uu sheegay in gole ahaan ay dib u eegis ku sameeyaan xeerkaas, ka hor intaan laga hadal furista ururada siyaasadeed. “Waxaan xoojin lahaa xeer No-14, xeer ahaan iyo farsamo ahaan iyo dhismo ahaan aad buu u liitaa iyada oo aan furitaanka ururada iyo arrimhaas oo dhan laga hadlin, waa inaynu xeerkaa ku noqonaa. Waxa kale oo aan qabaa xeerka doorashada golaha Guurtidu waa ahmiyada koowaad, xeerkaasi waa ka mudan yahay xeer walba, markaa waan in lagu soo daraa ajandaha,” ayuu yidhi Xildhibaan Rayte.
Xildhibaan Maxamed Cumar Jiir oo isna doodiisa ka dhiibtay ajandaha, waxa uu yidhi, “Haddii la leeyahay xisbiyada hala kordhiyo, waxaan odhan lahaa halagu bedelo in la yidhaahdo qofku isaga oo keligii ah ha isa soo sharaxo.”
Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble oo isna halkaas ka hadlay, waxa uu ku taliyay in dib loo dhigo furista ururada siyaasadeed. “Xeerkaa No-14 waxaan leeyahay imika iska yara wagash- wagasha baynu nahaye, dib aynu u yar dhigano oo aad ha looga tashado,” ayuu yidhi.
Sidoo kale, waxa doodaa shalay ka qaybgalay mudaneyaal kale oo door ah oo ka tirsan golaha Wakiilada.
Previous PostWasiirka Arrimaha Dibedda oo Sheegay in Xafiisyada Qaramada Midoobay ee Nairobi loo soo Rarayo SomalilandNext PostUK Archaeologist Finds Cave Paintings At 100 New African Sites	Blog